Mmemme Ndị Okike LucidPix
Anyị na-arụ ọrụ mgbe niile iji kwalite paịlị okike gị na ndebiri na atụmatụ ọhụrụ. Enwere ụdị 3D dị iche iche iji mee mmekọrịta, ọnọdụ, ihu na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịnabata nnabata, anyị ga-esochi mmalite nke etiti gị ma ị were were kesaa.
Nọgidenụ na-agụ iji mụta otu esi ekepụta friji 3D nke usoro, wee nyefee nke gị na njedebe nke ibe a!
Anyị enweghị ike ichere ịhụ ihe ị na-eme. Ezi okike!
Etu esi eke 3D Fighter
Onye ọ bụla nwere ike idobe 3D Efu ma nyefee ya maka ohere iji tinye ya dị ka usoro ọchịchị na ngwa LucidPix. Ewupụtara 3D nke ọ bụla sitere na ihe abụọ dị iche; onyonyo na-adọrọ mmasị na map omimi. Achọpụtara nkọwa zuru ezu n'okpuru.
Onyinye Nweta Onyinye
Onyinye Onye Okike
Enweghị mkpa ịme ihe ọ bụla ebe a, Onye ọrụ nyere ya ihe onyonyo a.
Mepụtara usoro a, jide n'aka na ị ga-ahapụ mpaghara maka onyonyo ọrụ iji gosipụta. Chekwaa dị ka faịlụ .png transperent.
Na-esote, imeputa maapụ miri emi dabere na foto 3D Frame gị. Họrọ site na ọkwa 5 omimi. Chekwaa dị ka faịlụ .png transperent.
Okpokoro 3D ikpeazụ
Anyị na-etinye eserese dị omimi na 3D 3D na Onye Okike, na-eme ka ihe ngosi XNUMXD nke ihe okike gị ọhụrụ!
Nkọwa usoro 3D
N’ịmepụta okpoko 3D dị mfe, enwere nkọwa ole na ole ị ga-ebu n’uche.
Usoro ntinye 3D ọ bụla ga-etinye ihe atọ ndị a; (1) 3D Frame, (2) Map nke omimi, na (3) Thumbnail. A gaghị anabata ntinye zuru ezu ma ọ bụ na-ezighi ezi maka mgbakwunye ngwa.
Mpaghara onyonyo nke etiti 3D gị
Ọha: 1440 × 1744
Filedị faịlụ: .png
Aha Njikwa: aha.png
Agba: agba zuru oke
Anaghị anabata (0,0,0 & 255,255,255)
Zụlite Alfa ndabere
Ejiri iji kọwaa omimi na 3D XNUMXD gị
Aha Faịlị: aha_depth.png
Agba: mono, enweghị nghọta
1, 1, 1 = nke kachasị anya
254,254,254 = kacha nso
Mpempe akwụkwọ Mirika
Map gị omimi, bụ eserese grays nke nwere agba ise.
Mkpa ọkụ dị nso, agba gbara ọchịchịrị karịa.
Enweghị gradi ma ọ bụ nghọta, naanị agba siri ike.
Smallerdị dị obere nke 3D Frame
Aha Faịlị: aha_thumb.png
Etu ị ga-esi lelee usoro ọhụrụ gị nke 3D na Facebook
Biko jide n'aka na ị ga - elele ihe okike gị na Facebook tupu i nyefee maka nchebara echiche.
Mepụta 3D Map na Omimi gị.
Họrọ onyunyo ndabere maka ebumnuche nnwale.
Debe 3D XNUMXD gị n’elu onyonyo nnwale ma bupu ya dị ka faịlụ .png.
Namkpọ faịlụ bụ isi. 3D okpokolo agba nwere ike inwe aha obula Map dị omimi kwesịrị inwe otu aha na “_depth” nke etinyere na njedebe, dịka “name_depth.png”
Bulite faịlụ abụọ ahụ n'otu post na Facebook maka ihe nlere anya.
Nyefee 3D Fighter gị
Biko pịa akara (1) obere mkpịsị aka, (2) 3D Frame na (3) Map dị n'ime otu faịlụ ma jikọta ya n'ụdị dị n'okpuru.
Ejighi n'aka otu esi eke 3D Fraị maka LucidPix? Nsogbu adịghị! Lelee ntuziaka dị n'elu!
Biko dị njikere na faịlụ zip gị nwere ihe atọ atọ a: Thumbnail, 3D Frame and Map Distrikti. Site na inyefe usoro 3D ị kwenyere na ị ga-erubere nkwekọrịta Mmemme Ndị Okike, akọwapụtara n'okpuru.
Nkwekọrịta Mmemme LucidPix
Ntuziaka Nkwanye Ego 3D
Nchịkwa afọ: must ga-abụrịrị afọ 18 ma ọ bụ karịa iji nyefee ọdịnaya gaa na LucidPix.
Ọdịnaya gị: LucidPix anaghị ekwu ikike ikikere ọ bụla ma ewezuga ikikere ị nyere anyị na nkwekọrịta a. I kwenyekwara na ị naghị emebi nzuzo, ikike omume, ma ọ bụ ikike ndị ọzọ.
Faịlụ ndị achọrọ: A gaghị atụle akwụkwọ ntinye ma ọ bụrụ na ha etinyeghị faịlụ atọ achọrọ; 3D XNUMXD, Omimi Map, na Thumbnail zipped n'ime otu faịlụ. Ọ bụrụ na achọrọ mwepụta (ihe atụ, ihe ọgụgụ isi, wdg), biko tinye ya na ntinye faịlụ zip.
Ndozigharị nkwekọrịta: Anyị na-edobe ikike idozigharị nkwekọrịta a n'oge ọ bụla na-enweghị nkwenye edeghị ede. Mgbanwe ọ bụla emee ga-adị mmeju ozugbo. Ọ bụrụ na ikwenyeghị ngbanwe ọ bụla emere, ị ga-eme ka anyị mara nke ọma na creators@lucidpix.com anyị ga-ewepụ ọdịnaya gị na weebụsaịtị Webụsaịtị anyị na / ma ọ bụ Ngwa.
Ọ bụrụ na anyị hụ ihe omume amachibidoro metụtara ntinye ọdịnaya, anyị ga-ajụ nnyefe kwuru.
Ufodu ihe omuma nke ihe amachiri ime bu:
Spaming nke ọdịnaya, dị ka otutu ntinye nke otu, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ faịlụ
Iomi faịlụ ndi ozo
Na-enyefe ngalaba ọdịnaya ọha, ma ọ bụ ọdịnaya ejighi aka gị
Inyefe IP ịda iwu, iwu akwadoghị, ma ọ bụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ
Nwebisiinka: must ga-enwerịrị ma ọ bụ jikwaa ikike niile ị nwere nyefee LucidPix. Etinyela faịlụ na-abụghị nke gị (dịka ọmụmaatụ, foto di gị na nwunye sere) ma ọ bụ tinye ihe ndị na-abụghị nke gị, dịka ọdịnaya achọtara na ịntanetị.
Iwu obodo na nke gọọmentị: must ga-agbaso iwu obodo na gọọmentị etiti mgbe ị na-eke ma na-edobe ọdịnaya na LucidPix. Anyị anaghị anabata ọdịnaya iwu akwadoghị, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, ma ọ bụ omume rụrụ arụ.
Mpempe weputara: contentfọdụ ọdịnaya nwere ike ịchọ ihe nlere na / ma ọ bụ ihe mgbapụta. Ọ bụrụ na achọrọ, biko tinye mwepụta na zipinye ozi.
Ozi nkeonwe: Etinyela akara onwe gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị, akara mmiri, aha, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ na faịlụ gị.
Nudity: Anyị anaghị anabata okpu gụnyere ụdị ịgba ọtọ ọ bụla.
Anyị na-edobe ikike ịnabata, ịjụ, ma ọ bụ wepu faịlụ maka ihe ọ bụla, n'oge ọ bụla.
Ihe Ọma Bipute
Nkwekọrịta Ndị Nkwado LucidPix
Emelitere ikpeazụ n’October 11, 2019. Na-anọchi nsụgharị mbu niile.
Nkwekọrịta a na-achịkwa otu i si eji Ihe Ndị E Kere Eke LucidPix na bulite ma ọ bụ nyefee Ọrụ ọ bụla na LucidPix. Nkwekọrịta a metụtara foto niile, ihe atụ, eserese, ndebiri, akụ 3D, na ihe osise ma ọ bụ eserese ndị ọzọ nke ị nyefere n'okpuru anyị ma ọ bụ bugoo na weebụsaịtị anyị n'okpuru nkwekọrịta a ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ ("Ọrụ (s))". A na-ezo aka na nkwekọrịta onyinye a dị ka “Nkwekọrịta”. “Weebụsaịtị” pụtara websaịtị anyị na ngwa anyị na-eme ka ọ dịrị mfe ịnweta weebụsaịtị ndị a ma ọ bụ okirikiri 3D Fọdara, gụnyere ma ọnweghị oke lucidpix.com, yana ngwa LucidPix anyị maka iOS na gam akporo.
1. Ikikere maka Ndị Ọrụ. I nyela anyi ikike inwetara ikike anyi iji, mepụtaghachi, igosiputa oha n’ihu, kesaa, gbanwee, gosi n’ihu ọha, na itughari Oru a na-adighi iche, n’uwa dum, ma obu ebighebi n’ime mgbasa ozi obula. Akwụkwọ ikike ahụ nyere ndị ọrụ nwere ike ịgụnye ikike ịgbanwe ma mepụta ọrụ ndị ọzọ dabere na Ọrụ ahụ, gụnyere mana ọnweghị oke ikike ịre ma ọ bụ kesaa maka ọrịre ọre ahụ ma ọ bụ nnomi ya ọ bụla ma ọ bụrụ na etinye ya na ya na ya ọrụ edemede ndị ọzọ, na usoro mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ nke a maara ugbu a, ọ bụrụhaala na ojiji ndị ọrụ dị otú a arụ Ọrụ arụgharịrị naanị maka otu ọrụ enyere ikike n'ihe gbasara Ọrụ mbụ. Maka idoanya, anyị nwere ike ikwe ka ndị ọrụ na ndị ọzọ nwere ikike (dị ka, na-enweghị mmachi, ndị na-ahụ maka ịzụ ahịa ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ) biputere ma ọ bụ kesaa Ọrụ ahụ na saịtị mgbasa ozi ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ, n'okpuru mmachi ọ bụla Onye Okike nyere. Nkwekọrịta.
2. Ikikere nke LucidPix. You na-enye anyị ikike na-enweghị iche, gburugburu ụwa, ebighebi, na enweghị ikike iji, mepụtaghachi, kesaa, ntanetị, ma gbanwee Ọrụ gị maka ebumnuche iji rụọ ọrụ weebụsaịtị ma ọ bụ Ngwa; ngosipụta nke Ọrụ gị; na-ekesa ma na-ere ahịa gị na ndị ọrụ; ịzụlite atụmatụ na ọrụ ọhụụ; na-edebe ọrụ gị; na ichedo oru gi. Anyị nwere ike iji Oru ahụ maka ebumnuche nke ire na ịkwalite Ọrụ gị, weebụsaịtị, azụmahịa anyị na ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ, nke ị nyere anyị ikike na-enweghị, zuru ụwa ọnụ na ikike eze na-enweghị iji, mepụtaghachi. , gosipụta n’ihu ọha, kesaa, gbanwee, gosipụta n’ihu ọha, ma sụgharịa Ọrụ ahụ dịka achọrọ. Also nyekwara anyị ikike, mana ọbụghị ụgwọ ọrụ, iji aha ngosipụta gị, ụghalaahịa gị, na aha ahia gị na njikọ ahịa na nkwalite ọrụ anyị na ikike anyị maka Ọrụ gị n'okpuru nkwekọrịta ahụ. Ọ bụrụ na anyị ejiri Ọrụ gị zụta ma kwalite Ọrụ gị ma ọ bụ weebụsaịtị, mmemme nkesa anyị, ọrụ anyị na onyinye anyị, ma ọ bụ saịtị mgbasa ozi mmekọrịta nke anyị, ma ọ bụ gbasaa ahịa maka ikikere Ọrụ, mgbe ahụ anyị nwere ike ịkwụ gị ụgwọ na ikike anyị. .
3. Ikike Nkike nke ikike
3.1 IP ikike. You na-anọchite ma nye ikike na ị nwere ikike, aha na mmasị na ọrụ a, gụnyere ikike nwebisiinka, ụghalaahịa, ikikere, ikike nke nzuzo, ikike nke ọha, ikike omume na ikike ndị ọzọ. , ma ọ bụ nwee ikike na ikikere niile iji nye anyị ikikere n'okpuru nkwekọrịta ahụ. Specifically na-anapụ ikike ikike gbasara omume ọfụma ọfụma gbasara Iwu dị ka iwu siri kọọ, ma ọ bụrụ na enyereghị ikike ọ bụla, ị kwenyere ịghara ịkagbu ikike ndị a, megide ndị mmekọ anyị na ndị ọrụ anyị. Further ga na-anọchi anya ma na-enye ikike na Ọrụ ahụ agaghị emebi IP ikike nke ndị ọzọ, nwere ihe na-eduhie eduhie ma ọ bụ nke na-agha ụgha, ma ọ bụ nwee ọdịnaya na-akwadoghị ma ọ bụ nke na-emebi iwu. Not gaghị ebugote ọrụ ọ bụla nke na-emebi ma ọ bụ mebie ikike IP nke mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ mejupụtara okwu ụgha ọ bụla, nkwutọ, ma ọ bụ okwu ọ bụla ọzọ megide mmadụ ọ bụla. Ikwesiri irube isi n'iwu kwesiri, ma obodo ma nke obodo.
3.2 Ntọhapụ. Ọ bụrụ na Ọrụ ahụ nwere onyonyo ma ọ bụ njiri mara nke njirimara, ụghalaahịa ma ọ bụ akara, ma ọ bụ akụ pụrụ iche nke ikike IP na-echebe, ị na-anọchi anya ma na-enye gị iwu na ị nwetagola mwepụta ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla dabara na ụdị nke ọkọlọtọ anyị. eweputara ala mmadu nile ka ohaputara na oru a.
4. Ndi nwe ya na iji oru a. Enweghị aha ọ bụla ma ọ bụ nwere ikike ọ bụla na ma ọ bụ nke Oru a bufere nye anyị n'ihi nkwekọrịta ahụ. Ewezuga ikikere nke enyere site na nkwekọrịta ahụ, anyị anaghị ekwu ikike ikikere ọ bụla maka Ọrụ a. Anyị onwe anyị na ndị ọrụ anyị na-eji Ọrụ nwere ikike, mana ọbụghị ọrụ ọ bụla, ịchọpụta gị dị ka onye edemede na isi iyi nke Ọrụ ahụ na usoro omenala. Na mgbakwunye, enwere ike ịgbanwe ma ọ bụ tinye metadata, na-enweghị ụgwọ anyị, ndị na-ekesa anyị, ma ọ bụ ndị ọrụ. Anyị agaghị ebu iwu maka na anyị anaghị erubere nkwekọrịta nke Onye Ọrụ Nkwekọrịta ma ọ bụ maka iji ndị ọzọ mee ihe n'ụzọ na-adịghị mma. Na-enye anyị ikike ịmanye ikike IP gị megide ndị na-emebi iwu, mana anyị enweghị ikike ime nke ahụ. Ọ bụrụ n’ikwere na ejirila ọrụ gị nke ọma, ikwenye na-ime ka anyị mata ma meekwa ihe ọ bụla na-enweghị nkwenye anyị edere tupu edee.
5. Ịkwụ ụgwọ
5.1 ricnye ọnụahịa na nkọwapụta ịkwụ ụgwọ. N'oge a, anyị enweghị usoro ịkwụ ụgwọ emepụtara maka okpoko 3D, na ntinye aka nke 3D onye ọrụ agaghị enweta ụgwọ akwụ ụgwọ maka ntinye ha na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa. Nke a nwere ike ịgbanwe n’ọdịniihu. Anyị nwere ike gbanwee nkọwa ricnye ọnụahịa na nkọwapụta ịkwụ ụgwọ site n'oge ruo n'oge, gụnyere mana ejedebeghị na imelite ụdị nke Ọrụ, mmelite ọnụahịa na nkwekọrịta ịkwụ ụgwọ, yana / ma ọ bụ iduzi gị na ọnụahịa andnye ọnụahịa na ozi ịkwụ ụgwọ maka ịnye ọnụahịa na ozi ịkwụ ụgwọ. Ikwesiri ileba anya na Ego na ugwo nkwuputa oge nile. Site n'ịnọgide na-edobe ma ọ bụ bughado Ọrụ ma ọ bụ site na iwepu Ọrụ, ị na-ekwenye ụgwọ ọnụahịa ọhụụ na nkọwa Paymentkwụ asgwọ dị ka edegharịrị site n'oge ruo n'oge. Ewezuga otu ekwuru na nkwekọrịta a, anyị enweghị ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị. Anyị nwere ike iji nhazi ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ dị ka PayPal ịkwado gị ịkwụ ụgwọ ahụ. Ọ bụrụ na anyị ma ọ bụ ndị anyị na ha na-arụ ọrụ na-enye nkwalite, ọnwụnwa, ule ma ọ bụ ụdị akara nke Ọrụ gị, anyị anaghị edenye ụgwọ ịkwụ ụgwọ na ngalaba a.
.5.2tụ ụtụ isi 9. Are na-ahụ maka ịmechaa mpempe akwụkwọ IRS ọ bụla dị mkpa iji nweta ịkwụ ụgwọ. “Onye US” (nke ndị IRS kọwapụtara) ga-ewetara anyị IRS Form W-8 zuru ezu. “Onye Ala Ọzọ” (dị ka ndị IRS siri kọwaa) ga-ewetara anyị IRS Form W-XNUMX zuru ezu iji kwupụta mbelata nke, ma ọ bụ mwepu ya, na-ejigide onye ọbịa nke mba ọzọ nke United States nwere ya. nkwekọrịta ụtụ isi ego. Ọ bụrụ na ụgwọ akwụrụ gị ego ọ bụla ga-akwụ ụgwọ ịnabata ụtụ ma ọ bụ ụtụ ndị ọzọ anakọtara site na isi iyi ọ bụla, anyị ga-ewepụ ego n'ụtụ a na ụgwọ ịkwụ gị. Anyị ga-agba mbọ iji nye gị otu nnata nke nnata ọrụ na-ekpuchi ụgwọ ụtụ dị otú a, ma ọ bụrụ na odide otu a. Anyị ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji nweta abamuru nke nkwekọrịta ụtụ ọ bụla metụtara ụtụ isi dị otú a.
6. Nyefe, nyefee ma jikwaa ọrụ gị
6.1 Nyefee ma nyefee ọrụ gị. Will ga - enyefe Ọrụ gị n'ụdị (s) ma site na usoro nnyefe nke LucidPix rịọrọ. Na mgbakwunye, ị ga-enyefe Ọrụ maka nyocha anyị dabere na ntuziaka anyị nyere gị nke gị. Anyị nwere ike gbanwee ntuziaka site n'oge ruo n'oge. Ikwesịrị ilele usoro ndụ anya. Anyị nwere ike ịnakwere ma ọ bụ jụ ọrụ ị bugoro na webụsaịtị ma ọ bụ na edobere anyị n'okpuru anyị, na uche anyị, enweghị nkkwupụta.
6.2 Ijikwa Ọrụ Gị. May nwere ike wepu ọrụ ọ bụla na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa n'oge ọ bụla site na ịkpọtụrụ anyị na creators@lucidpix.com na inye LucidPix ederede 90 ka edere ederede. Anyị nwere ike wepu Ọrụ ma ọ bụ kwụsị akaụntụ gị na uche anyị na-enweghị amamọkwa tupu oge eruo.
7. Ibu Ibu Ibu Will ga-ewepụ aha anyị na ndị enyemaka, ndị mmekọ, ndị ọrụ nche, ndị ọrụ, ndị ọrụ, ndị ọrụ ibe, ikike, ndị na-enye ego na ndị na - enye ikike na mkpesa ọ bụla, arịrịọ, mfu, ma ọ bụ mmebi, gụnyere ụgwọ ndị ọka iwu nwere ezi uche, na-ebili ma ọ bụ metụtara ọrụ gị ma ọ bụ ọdịnaya ọzọ ị nyefere n'okpuru anyị, ojiji nke weebụsaịtị ma ọ bụ imebi nkwekọrịta a. Anyị nwere ikike ịchịkwa ihe agbachitere ọ bụla, omume, ma ọ bụ okwu metụtara mbipụta nke sitere n'aka gị na ndụmọdụ na ọnọdụ nke nhọrọ anyị. Will ga-akwado anyị zuru oke na ịgbachitere ụdị ebubo, omume, ma ọ bụ okwu ọ bụla. Ego ọ bụla ma ọ bụ nke enwere ike iji gị ụgwọ n'okpuru ngalaba 5 dị n'elu nwere ike gbanyụọ ma belata ego ọ bụla ị nwere dị ka ọrụ dịịrị gị dị n'okpuru ebe a, na-enweghị agwa gị ma ọ bụ gwa gị.
8. Nkwụsị na Surlanahụ
8.1 Nkwụsị. Anyị nwere ike ịkwụsị nkwekọrịta a, wepu Ọrụ ọ bụla, ma ọ bụ kwụsịtụ akaụntụ gị, na-enweghị ọkwa tupu. Anyị agaghị enwe ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị ma ọ bụrụ na anyị akwụsị nkwekọrịta maka ihe kpatara ya. Site na iji ọmụma atụ, ịgaghị ebudata ọdịnaya LucidPix maka ebumnuche nke ịkpa ike na-ebute ọnụ ọgụgụ nke ọdịnaya site na onye nyere ya ma ọ bụ maka ebumnuche bụ ịkpalite ịkwụ ụgwọ. Nwere ike mechie nkwekọrịta a n'oge ọ bụla, na opekata mpe 90 ụbọchị ederede edeturu anyị site na email na creators@lucidpix.com. Anyị ga-eji mbọ ezi uche dị na ya mee ka wepụrụ Weebụsaịtị anyị webụsaịtị nke ndị mmekọ anyị niile (gụnyere weebụsaịtị ndị akpọrọ aha) n’ime ụbọchị 90 ka ewepụrụ Work ahụ na weebụsaịtị anyị. Tupu nchupu nke nkwekọrịta a ma ọ bụ wepu Ọrụ gị na weebụsaịtị nke ndị mmekọ anyị, ndị ọrụ anyị nwere ike ịga n'ihu nweta akwụkwọ ikike ọhụrụ na Ọrụ gị.
8.2 Mmetụta nkwụsị. Anyị nwere ike ịga n'ihu na-eji Ọrụ ahụ maka naanị ihe ndekọ ya na ebumnuche maka ya ma ọ bụ dịka ekwuru na nkebi 8.2. Oge nke 3, 4, 5.1 (ọ bụrụ na LucidPix nwere ọrụ ịkwụ ụgwọ), 5.2, 7, 8, na 9.1 ga-alanarị nkwụsị nke nkwekọrịta a. Ikikere ọ bụla enyere ndị ọrụ anyị ma ọ bụ anyị tupu ụbọchị nchupu ma ọ bụ tupu iwepụ Ọrụ ọ bụla na Weebụsaịtị ga-adịgide nkwụsị nke nkwekọrịta a. Ọzọkwa, ndị ọrụ nke Nkwekọrịta Onye ọrụ ha nyere ha ikike ikikere ma nweta Ọrụ dịka ụdị mbipụta (dịka ọmụmaatụ nlele) nwere ike ịmegharị ikikere ahụ gaa na ikikere ojiji. Anyị ga-eweta ịkwụ ụgwọ dịka ekwuru na nkebi nke 5 maka ụgwọ ikikere ọ bụla anyị nwetara dị ka ndị metụtara Ọrụ mgbe ejedebe nkwekọrịta a.
9. Iche iche.
9.1. Mmekọrịta. Ọ bụrụ na ibi na United States, mmekọrịta gị na LucidPix, ụlọ ọrụ United States.
Nkwukọrịta 9.2. You kwenyere na LucidPix nwere ike ịkpọtụrụ gị site na ozi-e iji nwee ike ịgwa gị okwu gbasara ọdịnaya ọdịnaya nke LucidPix na ụzọ dị mma anyị ga-esi na-arụkọ ọrụ.